ယို Bottle သ silica gel -Plastic Sorting ပစ္စည်း - တရုတ်နန် Suyuan Lanning
No.238 တောင်ပိုင်း Tongbai လမ်း, Zhongyuan ခရိုင်, Zhengzhou, တရုတ်
မွန်-Fri: 00 am-6 9: 00pm (ကျွန်တော်တို့ကို nonworking အချိန်ပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျချန်ထားပေးပါ)
Air ကို-လက်ရှိ Specific Gravity ခြား
နှစ်ချက် Shaft Shredder
လူပျို Shaft Shredder
Cable ကို Stripper စက်
desktop-type အမျိုးအစား Cable ကို Stripper စက်
အပူပိုင်း-type အမျိုးအစား Cable ကို granules စက်ရုံ
ပေါင်းစည်း-type အမျိုးအစားကြေးနီဝါယာကြိုး granules
စိုစွတ်သော-type အမျိုးအစား Cable ကို granules စက်ရုံ
တုရုမြို့ / ရော်ဘာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပစ္စည်းဖြုန်း
တုရုမြို့ Pretreatment စက်
တုရုမြို့ Piece Cutter
တုရုမြို့ / ရော်ဘာအမှုန့်ဖြုန်းတီး
ရေနံရန်တုရုမြို့ Pyrolysis ဖြုန်း
မော်တော် Crush ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း Producton လိုင်း
မော်တော် Stator ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပစ္စည်း
ပလတ်စတစ် Crush ပစ္စည်းဖြုန်း
ရေတိုင်ကီ Pretreatment ပစ္စည်း
ရေတိုင်ကီကြေးနီ & လူမီနီယမ်ခြား
ရေတိုင်ကီ Sawing စက်
ဆေးပညာ Package ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပစ္စည်းဖြုန်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူမီနီယမ်ပလတ်စတစ်အထုပ် Sorting လိုင်း
ယို Bottle သ silica gel -Plastic Sorting ပစ္စည်း
ရော်ဘာ Powder စေရန်စွန့်ပစ်တုရုမြို့ထုတ်ယူခြင်း
ရေတိုင်ကီကြေးနီ & လူမီနီယံခြား
မော်တော်နှိမ်နင်းပြန်လည် producton လိုင်း
silica gel ဟာ -plastic sorting ကိရိယာများ
ဒါဟာအဓိကအား PP ပလပ်စတစ်နှင့် silica gel ဟာဆေးဝါးကုသမှုပြုတ်ရည်ပုလင်းနဲ့ပြုတ်ရည်အိတ်ထဲမှာစွန့်ပစ်ဘက်ထရီအိုးတလုံးနှင့် silica gel ဟာ plug ကို, ပလတ်စတစ်နှင့် silica gel အတွက်စွန့်ပစ်အိမ်သူအိမ်သားကရိယာပလတ်စတစ်၏ fixed ပလတ်စတစ်အတွက် silica gel, ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်များစုစည်းခြင်းအသုံးပြုသည် သည်အခြားလျှပ်စစ်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပစ္စည်းများ။
1. ကာယစုစည်းခြင်း, ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှု; ပစ္စည်းကိရိယာများစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်။
2. ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတင်သွင်းနေကြတယ်, sorting ကိရိယာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရေးအတွက်လုံလောက်; လက်စွဲလည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ PLC ထိန်းချုပ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအလွယ်တကူစစ်ဆင်ရေးစေသည်။
3. ရသောပစ္စည်းနှင့်အတူအဆက်အသွယ်အဆိုပါအတွင်းစိတ်အစိတ်အပိုင်း sorting တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်သည့်သံမဏိနှင့် chrome များတွင်လည်းကောင်း, ချမှတ်။
4. မှန်ပွတ်တိုက်အားအသုံးပြုခြင်းနှင့်သီအိုရီလမ်းညွှန်ခြင်း, ပလတ်စတစ်, silica gel နှင့်ရော်ဘာတိကျစွာကွဲကွာကြသည်, နှင့်အမြင့်ဆုံး sorting သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကျော်ကို 99% ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
5. စနစ်, အလိုအလျောက်ပစ္စည်းပြန်လာနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုဖျက်ထုတ်စနစ်က sorting ချိန်ညှိအော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်, ပစ္စည်းရုတ်သိမ်းစနစ်, အတူအသငျ့, မြေတပြင်လုံးစက်ရုံတစ်ဦးတည်းသာလူတဦးခြင်းဖြင့် operated နိုင်ပါသည်။
output (ကီလိုဂရမ် / H ကို)
* 2280 * 4250 5580
* 3150 * 4250 5580
ယခင်: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူမီနီယမ်ပလတ်စတစ်အထုပ် Sorting လိုင်း
နောက်တစ်ခု: မော်တော်နှိမ်နင်းပြန်လည် producton လိုင်း
Henan SUYUAN LANNING နည်းပညာ CO ။ , LTD မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် pricelist အကြောင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, သင့်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပို့လိုက်ပါ။